Kooxdayada | ALC Ozaukee
Katie waxay ku biirtay ALC agaasimaha barnaamijka bishii Janaayo 2019. Waxay aqoon u laheyd ALC u adeegto umeerin ahaan dhowr sano. Waxay mas'uul ka tahay tababarka baraha, jiheynta ardayga iyo qiimeynta iyo xulashada manhajka. Katie waxay shahaadada Masterka ka qaadatay Qorista Xirfadda. Iyadu waa isku duwaha waxbarashada dhalinyarada ee Kaniisadda Grace Lutheran ee Grafton.
Sarah waxay ku biirtay ALC iyada oo ah Maareeyaha Fulinta bishii Maajo, 2020. Waxay leedahay in kabadan 20+ sano oo ah khibrad dhisida xiriirro iyo la shaqeynta daneeyayaal kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ugu sareeya, bulshada iyo hogaamiyaasha aan faa'ido doonka ahayn, iyo maalgaliyeyaasha. Waxay horey u ahayd VP of Generation Kheyraadka Xarunta Sojourner Family Peace Center iyo Agaasimaha Horumarinta ee Horrumarka Junior ee Wisconsin. Sarah waxay maamushaa jihada istiraatiijiga ah ee ALC ay kujirto lacag aruurinta, wacyiga bulshada, isgaarsiinta, iyo barnaamijyada.
Linda waxay ku biirtay Golaha Agaasimayaasha ALC sanadkii 2012. Waxay xubin ka tahay Kaniisadda Grace Lutheran, Grafton, kaasoo ALC ka bilaabay howlgalka 30 sano ka hor. Linda waxay haysataa shahaadada Masterka ee waxbarashada. Tan iyo markii ay howlgabnimada ka noqotay gudoomiye degmo, Linda waxay sii wadataa firfircoonida waxbarashada iyadoo siineysa hormarin xirfadeed macallimiinta dalka oo dhan.
Josh wuxuu ku biiray guddiga ALC xagaagii 2019. Wuxuu banki ahaan jiray in ka badan 10 sano iyo maamule waaxeed 5 sano ka badan. Marka lagu daro u adeegida guddiga Xarunta Wax-qorista Dadka Waaweyn, wuxuu sidoo kale u shaqeeyaa hoggaamiye Kaniisadda Bulshada Cedar Creek ee Grafton. Intaa waxaa u dheer, wuxuu ku tabarucaa dhowr faa'iidooyin oo kala duwan. Josh wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Carroll.
Bob wuxuu ku lug lahaa Xarunta Akhriska Dadka Waaweyn 10 sano. Bob wuxuu ahaa gudoomiyihii qabanqaabiyay guddiga joogtada ah ee ALC laga soo bilaabo 2011 - 2013 wuxuuna soo noqday madaxweynaha guddiga alC laga soo bilaabo 2013 ilaa 2016. Bob waa shaqaale bulsho oo howlgab ah oo la nool xaaskiisa, Jan, oo ku nool Thiensville. Wuxuu xubin ka yahay Rotary, wuxuu u shaqeeyaa madaxweynaha hay'adda taariikhiga ah ee Mequon-Thiensville wuxuuna ahaa Sannadkii 2006 ee Mequon-Thiensville Citizen.